I-China H Beam Insiza YeSakhiwo Sokukhiqizwa Komshini Wokuqothula kanye Nezimboni | I-Ding Tai
Umshini Wokuqothula Insimbi we-Q69 Shot Blasting wokuhlanza amapuleti
Singakwazi ukuklama nokukhiqiza usayizi ohlukile womugqa wensimbi we-iron pretreatment ngokuya ngesidingo samakhasimende. Sicela uthumele imininingwane yakho ku-imeyili yethu.
Lolu hlobo lomshini wensimbi we-auto blasting kanye nomshini wokufakelwa uklanyelwe futhi wakhiqizwa ngokwamukela izinzuzo zemikhiqizo efanayo kusuka ngaphakathi ezweni naphesheya. Ingxenye yokuhlanza egqwala (ukuhlanza ukuqhuma) ithola isondo lokuqhuma okukhulu elisebenza kahle kanye nohlobo lokuvala isihlabathi. Umshini oswelayo wamukela ngokukhethekile ukwenziwa okuphezulu kwe-nylon rolling kanye ne-high-pressure ventilator. Ingxenye yokuhlanza neyomile ingahle isebenzise izindlela ezahlukahlukene zokushisa. Ingxenye yokufafaza ngopende isebenzisa indlela yokufafaza engenawo umoya omningi. Isethi ephelele yemishini ilawulwa yi-PLC, futhi iyimishini enkulu ephelele yohlobo oluphambili lwakwamanye amazwe.
Lo mshini wokuqhuma kokudubula kanye nomugqa wokudweba usetshenziselwa ukwelashwa okungaphezulu (okuwukuthi ukugcoba kuqala, ukususwa kokugqwala, ukufafazwa ngopende nokomisa) kwepuleti yensimbi kanye nezingxenye ezahlukahlukene zokwakheka, kanye nokuhlanza nokuqinisa izingxenye zesakhiwo zensimbi.
Lo mshini usetshenziswa kabanzi eSelbardard, embonini yokwakha imikhumbi, emishini yemishini, njll.
Amamodeli nokucaciswa komugqa wokusika weplasta yensimbi:
Imuphi i-Service Antai ongayinikeza?
1. Onjiniyela bethu bangasebenza ngokuhlukile ngokuya ngezidingo zokuklanywa kwamakhasimende wemishini. futhi uthumele isiqinisekiso samakhasimende ukusiza amakhasimende ukugcina izindleko.
2. Ngenkathi kwenziwa imishini, senza izithombe zokukhiqizwa komkhiqizo, sathumela kwikhasimende ukubheka inqubekela phambili.
3. Izinwele zezimpahla ziya, sizothumela imibhalo yasekuqaleni yekhasimende (njengohlu lokupakisha, umthethosivivinywa, i-CO, iFomu E, iFomu A, iFomu F, iFomu M, B / L njll.)
4. Singanikeza abathengi umdwebo wesisekelo samahhala sesiNgisi, imidwebo yokufaka, imanuwali, izincwadi zokugcina nezingxenye zemidwebo.
5. Singathumela onjiniyela bethu ukufakwa nokulungisa inkinga phesheya kwezilwandle, kanye nokuqeqeshwa kwamahhala kwabasebenza nabasebenzi bezokulungisa.
6. Sineqoqo lesistimu yangemuva kokuthengisa, i-ID izothunyelwa kwikhasimende ngalinye, bangangena kulolu hlelo ababheka lonke ulwazi lokuthenga imishini nezingxenye zalo. Sinikeza ngokubonisana online-amahora online.
1. Ngabe udinga izinsuku ezingakanani ukukhiqiza lo mshini?
Lo mshini wenzelwe ngokukhethekile ngokuya ngesidingo sakho esithile. Ukusuka ekuklameni konjiniyela kuye ekuqedeni ukukhiqizwa, Kudinga izinsuku ezingama-45-50.
2. Ngabe ifektri yakho yenzani mayelana nokulawulwa kwekhwalithi?
Sikhokha okubaluleke kakhulu ekuphathweni kwekhwalithi kusuka ekunceni kakhulu kuze kube sekupheleni komkhiqizo. Wonke umshini uzohlanganiswa ngokuphelele futhi uhlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuthunyelwa.
3. Yini isiqinisekiso sakho sekhwalithi yomshini?
Isikhathi sokuqinisekisa ikhwalithi unyaka owodwa, sikhetha izakhi zomkhiqizo odumile womhlaba wonke ukugcina umshini wethu usesimweni esihle sokusebenza.
4. Uyakwazi ukunikeza ukufakwa nokuyalela phesheya? Kuzothatha isikhathi esingakanani?
Yebo, sinikezela ngezinsizakalo zaphesheya, kepha ikhasimende lidinga ukukhokhela amathikithi endiza anjiniyela nokudla kwamahhotela.
Umshini omncane uvame ukuthatha zingakapheli izinsuku ezi-5.
Umshini omkhulu uvame ukuthatha izinsuku ezingama-20.
5. Ngingakwethemba kanjani ukuthi ulethe umshini ofanele njengoba ngikuyalile?
Sizoletha umshini wekhwalithi enhle njengoba sixoxe futhi saqinisekisa uku-oda. Umnyombo wesiko lenkampani yethu yinto emisha, ikhwalithi, ubuqotho kanye nokusebenza kahle. U-Antai ungumthengisi wegolide we-ALIBABA'S ngokuhlolwa kwe-BV & TUV. Ungahlola ne-ALIBABA, asikaze sibe nesikhalazo kumakhasimende ethu.
UMA UFUNILE, I-PLS CHEKA ISIKHUMBUZO SAMAKHAYA.
Esedlule: Izinga eliphakeme eliphakeme le-Shot Blasting Turbines
Olandelayo: Ikhampasi Ejwayelekile Yengcindezi Yesihlabathi Sase-Blasting Sand
H umshini wokudubula uqhuma, wadubula Umshini Wokupholisa, ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, Shot Blasting Wheel, Umshini wokuqhuma kwe-Shot, Shot Blasting Turbine, Yonke Imikhiqizo